WARBIXIN: Kaddib Heshiiskii Rekoodhka Aduun Ahaa Ee Kepa Arrizabalaga, Halkan Kaga Bogo 22-ka Goolhaye Ee Ugu Qaalisan Taariikhda Kubadda Cagta - GOOL24.NET
WARBIXIN: Kaddib Heshiiskii Rekoodhka Aduun Ahaa Ee Kepa Arrizabalaga, Halkan Kaga Bogo 22-ka Goolhaye Ee Ugu Qaalisan Taariikhda Kubadda Cagta
Taariikhda kubbada cagta waxaa abid ugu qaalisanaa ciyaartoyda weerarka iyo khadka dhexe waxaana qiimaha ugu hooseeya lagu iibsan jiray goolhayayaasha iyo difaaca laakiin gabi ahaanba arintaasi waxay u muuqataa in ay isbadashay iyada oo waqti kooban ay kooxaha Liverpool iyo Chelsea ay rekoodho cusub ku dhigeen saxiixyada Alisson iyo Kepa.
Iyada oo markii hore lala yaabanaa in Liverpool ay 65 milyan gini ku soo xero galisay Alisson ayay Chelsea noqotay kooxda markiiba rekoodhkan ku jabisay saxiixa goolhaye Kepa Arrizabalaga kaas oo ay kula soo wareegtay 71.6 milyan gini oo u dhiganta 80 milyan euros.
Heshiiskii uu Alisson Becker ugu wareegay Liverpool waxa uu buugga taariikhda baalka koowaad ka beddelay ruug caddaaga Talyaaniga ah ee Buffon oo muddo 17 sannadood ah ay dunidu u aqoonsanayd goolhayaha ugu qaalisan caalamka oo dhan, kaddib markii ay Juventus sannadkii 2001 kaga soo iibsatay Parma lacag dhan £32.5 milyan oo Gini.
Laakiin inta aanu Alisson bilaaban kulankiisii ugu horeeyay ee rasmi ah ee kooxdiisa cusub ee Liverpool waxaa markiiba rekoodhkiisa suuqa lagu jabiyay saxiixa Kepa Arrizabalaga taas oo u fiican goolhayaha ree Brazil si aanu kalidii culays waali ah u dareemin.
Xaagan ayaa noqday mid lagu xusuusan doono rekoodhada suuqa kala iibsiga ee goolhayaasha iyada oo hadda horyaalka Premier League uu how u noqday goolhayayaal hibo ciyaareed oo aad u saraysa leh.
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa 22-ka goolhaye ee dunida ugu qaalisan, kuwaas oo kooxuhu ay kula kala wareegeen lacagtii ugu badnayd.
22. Sebastien Frey – £9.8m: Inter Milan ayaa kasoo iibsatay naadiga yar ee Cannes sannadkii 1998 iyadoo u dhubtay lacag dhan £9.8 milyan oo Gini, hase yeeshee goolhayahan u dhashay waddanka Faransiiska ayaa ku fashilmay inuu kasoo baxo shaqadii loo soo iibsaday, waxaana uu beddel suge u noqday halyeygii Gianluca Paglica, ka hor intii aanu u wareegin Parma iyo Fiorentina oo wakhtiyo wanaagsan uu ku qaaday.
21. Fraser Forster – £10m: Sannadkii 2014 ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah goolhayeyaasha waddanka Ingiriiska u dhashay ee haybadda ciyaareed leh, waxaana markaas lacag dhan £10 kasoo bixisay Southampton oo kasoo qaadatay Celtic, hase yeeshee bandhig ciyaareed wanaagsan oo uu muujiyey kaddib, waxa uu ka baxay horyaalka Premier League oo ay ugu dambaysay bishii December ee 2017.
20. Wojciech Szczesny – £10m: Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa heshiis la gashay Arsenal si ay uga qaadato goolhaye Wajciech Szczesny, waxaanay u shubtay lacag dhan £10 milyan, si uu beddel ugu noqdo Gianluigi Buffon oo gaboobay, waxaana uu hadda lambarka koowaad ee naadiga haysta horyaalka Talyaaniga kula dagaallamayaa Mattia Perin oo midkood si rasmi ah uu u buuxin doono booskii uu banneeyey Buffon oo u wareegay PSG.
19. Asmir Begovic – £10m: Shan sannadood oo uu u ciyaarayey Stoke City addib, waxa uu lacag dhan £10 milyan ugu wareegay Chelsea sannadkii 2015, balse waxa uu awood u yeelan waayey inuu fursad ka helo Thibaut Courtois, waxaanay taasi khasabtay in goolhayahan reer Bosnia uu u wareego Bournemoth xagaagii hore.
18. Petr Cech – £10m: 11 sannadood oo cajiib ahaa oo uu la joogay Chelsea kaddib, waxa uu Petr Cech go’aan ku gaadhay sannadkii 2015 inuu u wareego kooxda reer London ee Arsenal iyadoo uu ogyahay xafiiltanka Chelsea kala dhexeeya. Waxay markaas Chelsea heshay lacag dhan £10 milyan oo Gini oo ay Arsenal bixisay.
17. Ivan Pelizzoli – £10.2m: Markii ay Roma baankeeda lacagta u jjebisay Ivan Pelizzoli waxa ahaa 20 jir kaliya, waxaanay kasoo qafaalatay Atalanta oo uu udub-dhexaad u ahaa xili ciyaareedkii markaas dhamaaday, hase yeeshee marnaba kama soo bixin wixii laga filayey, waxaana ay taasi keentay in kooxdu iska dirto oo uu horyaalka heerka labaad ka ciyaaro.
16 Mattia Perin – £10.5m: Goolhayihii koowaad ee Genoa, Mattia Perin ayaa ay Juventus xagaagan kasoo bixisay lacag dhan £10.5 milyan si uu ugu dagaallamo booska uu banneeyey Buffon oo PSG u wareegay.
15. Jasper Cillessen – £11.1m: Goolhayahan heerka caalami ee reer Holland ayaa Barcelona ay sannadkii 2016 soo iibsatay, hase yeeshee kursiga kaydka ayaa uu weli ku jiraa isagoo booska koowaad uu ka haysto Marc-Andre ter Stegen.
14. Angelo Peruzzi – £12.5m: Si kalgacayl leh ayay dadkuu ugu yeedhaan magaca Tyson iyo The Boar, iyagoo uga jeeda jidhkiisa awoodda badan. Waayadiisii waxa uu kasoo ciyaaray labada kooxood ee Juventus oo kala soo wareegtay Lazio, hase yeeshee mar kale ayaa suuqa lasoo dhigay oo ay Lazio kagala soo noqotay Juventus lacag dhan £12.5 milyan, waxaana uu markaas kaddib la joogay toddoba sannadood.
13- Jan Oblak – £12.5m: Udub-dhexaadka kooxda Atletico Madrid ee wakhtigan, waxa uu kooxda Diego Simeone ku biiray sannadkii 2014 iyagoo kasoo bixiyey lacag dhan £12.5 milyan oo ay kaga soo qaateen Benfica si uu u buuxiyo booskii uu markaas bannaynayey Courtois oo Chelsea ay amaah kaga soo qaateen, dibna ugu laabanayey.
12 Angelo Peruzzi – £13.3m: Inter Milan ayaa sannadkii 1999 ka soo iibsatay Juventus iyagoo bixiyey lacag dhan £13.5 milyan, hase yeeshee xili ciyaareedkii u horreeyey oo dhan waxa uu saftay hal kulan, kaddib dhamaadkii xili ciyaareedkiisii u horreeyeyna waxa uu u wareegay Lazio oo lacag yar oo jaban ay Inter ka siisay.
11. Sebastien Frey – £14.7m: Markii uu boos ka waayey Inter Milan oo uu hormood u ahaa goolhayihii ruug-caddaaga ahaa ee Francesco Toldo, waxa uu Frey ku khasbanaaday inuu ka tago garoonka San Siro oo uu u wareego Parma oo uu markaas ka tegay Buffon, waxaana ay Inter ka heshay lacag dhan £14.7 milyan oo ay ka shubtay Parma.
10. Claudio Bravo – £15.4m: Markii uu Pep Guardiola la wareegay Manchester City waxa uu ka mid noqday ciyaartooyadii ugu horreeyey ee uu heshiiska la galay, waxaanu markiiba booska kala baxay Joe Hart.
Hase yeeshee isaga laftiisa masiibo ayaa ku dhacday markii uu sameeyey khaladaad waaweyn oo sababay in kursiga kaydka loo diro xili ciyaareedkii tegay ee 2017 oo Ederson lambarka koowaad lasiiyey.Man City waxay Barcelona u shubtay markii ay Bravo soo kaxaysanaysay lacag dhan £15.4 milyan oo gini.
9. Francesco Toldo – £17m: Markii uu udub-dhexaad u noqday kooxdii Parma sannadkii 2001 ee ay laacibiinteeda ka midka ahaayeen Gabriel Batistuta iyo Rui Costa, waxa uu Francesco Toldo u wareegay Inter Milan oo kasoo bixisay lacag dhan £17 milyan oo Gini. Waxa uu San Siro joogay siddeed sannadood oo uu sannadihii 2005 iyo 2010 kula guuleystay horyaalka Serie A.
8-David de Gea – £18.9m: Go’aankii Manchester United ay sannadkii 2011 ku gaadhay inay £20 milyan ka bixiso De Gea oo ay da’diisu yarayd, waxay u muuqatay arrin waali ah markii uu kulamadii u horreeyeyba sameeyey Khaladaad waaweyn.
Isaga oo Atletico Madrid jooga ayaa ay Manchester aamintay, waxaana markii uu Premier League yimid ee uu wakhti kooban joogay ka mid noqday ciyaartooyada ugu muhiimsan ee Red Devils, iyadoo saddexdii sannadood ee tegayna uu noqday goolhayaha ugu wanaagsan horyaalka waddanka Ingiriiska.
7. Bernd Leno – £19.2m: Waa goolhaye da’ yar oo uu tababaraha cusub ee Arsenal ee Unai Emery doonayo inuu ku aamino lambarka 1aad, isla markaana uu booska ka cidhiidhsado Petr Cech. Waxay Gunners kasoo bixisay £19.5 milyan Gini oo ay siisay Bayern Munich oo ah halkii uu kusoo baxay.
6. Manuel Neuer – £21m: Imaatinkiisii Bayern Munich waxa uu kooxda reer Bavaria u horseeday guulo xidhiidh ah oo horyaalka dalka gudihiisa ah. Manuel Neuer oo lagu tiriyo goolhayeyaasha dunida ugu wanaagsan, waxa uu hadda garoonka Alianz Arena ku sugan yahay xili ciyaareedkiisii toddobaad oo uu doonayo inuu mar kale guulo la gaadho.
Waxa uu Bayern Munich kaga soo biiray kooxda kale ee ka dhisan isla Germany ee Schalke oo Bayern ay kagala soo wareegtay lacag dhamayd £21 milyan oo Gini, hase yeeshee wuu u qalmayey wixii laga bixiyey marka la eego sida uu qaybta weyn uga qaatay guulihii kooxdu gaadhay muddadii uu joogay.
5- Jordan Pickford – £25m: Xagaagii hore ayay Everton £25 milyan oo Gini kaga soo iibsatay Sunderland oo u dhaadhacday heerka labaad, hase yeeshee waxa uu muujiyey ciyaar wanaagsan, isagoo goolhayaha koowaad ee xulka qaranka England ahaa Koobkii Adduunka Ruushka ee ay kaalinta afraad ka galeen.
4. Ederson – £35m: Manchester City ayaa xagaagii hore ka dhigtay goolhayaha labaad ee dunida ugu qaalisan laacibka reer Brazil ee Ederson markii ay lacag dhan £35 milyan oo Gini u shubtay Benfica. Waxa uu beddelay oo booska koowaad markiiba kala baxay goolhaye Bravo oo khaladaad badan sameeyey.
3. Gianluigi Buffon – £32.6m: Muran la’aan waxa heshiiskii ay Juventus kula soo wareegtay lagu tilmaamay kii ugu qaalisanaa qarnigii 21aad ee goolhaye lala galay markii ay Parma kaga soo iibsatay lacag dhan £32.6 milyan oo gini sannadkii 2001. Muddo 17 sannadood ah oo uu joogay Juventus waxa uu la qaaday koobab tiro badan isaga oo u adkaystay sannado dib loogu celiyey heerka labaad iyo saddexaad kaddib musuq-maasuq lagu eedeeyey Old Lady.
2. Alisson – £65m: Liverpool ayaa u jebisay qasnaddeeda goolhayaha xulka qaranka Brazil ee Alisson Becker oo noqonaya midka ugu qaalisan dunida. 25 jirkan ayay Reds u dhaqaaqday si ay uga baxdo mushaakilka faraha badan ee sannadihii u dambeeyey ka haystay goolhayeyaasha, waxaana ay Roma u shubtay lacag dhan £65 milyan oo Gini oo ka dhigaysa goolhayihii ugu qaalisanaa taariikhda.
1-Kepa Arrizabalaga-71.6m: Chelsea ayaa ku qasbanaatay in ay rekoodhka suuqa kala iibsiga goolhayaasha ku jabiso Kepa Arrizabalaga kadib markii uu Courtois iska diiday in uu tababarka kooxdeeda qaato waxayna kala dooratay in ay ciqaab adag mariso oo ay kooxdeeda ku sii hayso balse uu si xor ah kaga baxo Stamford Bridge iyo in ay 35 milyan gini ka hesho oo ay u dhaqaaqdo badalkiisa.
Chelsea ayaa Kepa Arrizabalaga ka soo bixisay 71.6 milyan gini oo u dhiganta 80 milyan euros waana lacagtii heshiiskiisa lagu burburin karayay, laakiin waxaa la yaableh in lix bilood ka hor lagu heli karayay 17 milyan gini markaas oo ay Real Madrid heshiis la gaadhay laakiin go’aankii uu Zidane ku aaminay Navas ayaa keenay in uu saxiixay heshiis 2025 ah oo lagu burburin karayay 80 milyan taas oo Chelsea ku qasabtay in ay bixiso 60 milyan dheeraad ka ah lacagtii ay Madrid bixin kartay bishii January ee horaantii sanadkan.